Ikwesiri Inweta Nsonaazụ Nchọgharị Search a | Martech Zone
Tuzdee, Machị 3, 2009 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
N'abalị a, enwere m obi ụtọ ịgwa mmemme mmeghe nke ndị na-eme egwuregwu, ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ Rainmakers. N'ịbụ onye bi na Indianapolis maka afọ 7 ma jiri nwayọ na-eme njem nke ngalaba teknụzụ, ọ dị mma ịhụ nke a.
Emere m skit n'abalị a ma chee na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Doug Theis nọnyere m na Fraịde mgbe m kwusịrị echiche ahụ ma wepu anyị edemede ọnụ. Skit bụ ihe gbasara ụlọ ọrụ aghụghọ na-achọ ihe IT iji nyere aka dozie esemokwu Exchange. Anyị mere ka ụlọ ọrụ ahụ chọọ enyemaka - nke mbụ na Facebook, mgbe ahụ LinkedIn, mgbe ahụ Twitter na n'ikpeazụ na ebe nrụọrụ weebụ.
Ọdachi dakwasịrị nke ọ bụla n’ime ndị a na-ajụ ndị mmụọ ase. Ọbụna ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ntinye aka, jupụtara na mgbasa ozi na-ekwu okwu - na-enweghị ọdịnaya na-akwado nkwado nke IT Exchange na-agba izu ma ọ bụ ụzọ ọ bụla dị irè isi kpọtụrụ ụlọ ọrụ. Nzaghachi ọ bụla bụ ihe ịtụnanya gabigara ókè site n’enyemaka nke Bọọlụ Lorraine na Doug Theis nke Datalọ Ọrụ Data Ndụ.
Ọgwụgwụ nke skit bụ naanị m na-ekwu maka nsonaazụ dị mkpa nke Google na-eweta, ebumnuche nke onye ọbịa, yana pacenti ojiji. Ndị mmadụ gara na Facebook ebughi n'uche ịzụta, mana onye na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ebumnuche. 90% nke ndị mmadụ ugbu a na-etinye ọchụchọ na ọrụ Internetntanetị ha kwa ụbọchị - Facebook, Twitter, LinkedIn, wdg. Jikọtara erughị 4%.
Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ ndị na-achọ n'ụzọ dị irè na-eduga na-abata ga-ahu nagide ụfọdụ ụdị nke Search Engine Marketing atụmatụ (ma ọ bụ otutu). De blọgụ maka SEO bu ihe di egwu nke uku maka inweta ndu.
Blọọgụ na-n'ụzọ kwesịrị ekwesị search engine kachasị. Unlimited iru na nnukwu ọdịnaya nke na - aga n’ihu - ọ bụrụhaala na ị na - ede nnukwu ọdịnaya, a ga - achọta gị.
Weebụsaịtị ndị na-n'ụzọ kwesịrị ekwesị search engine kachasị. Obere na oke saịtị na isiokwu kachasị mma, ebe nrụọrụ weebụ SEO na-abụkarị ihe omume furu efu.
Saịtị na kachasị ọdịda peeji nke azum. Nke a bụ usoro dị irè ma dị oke ọnụ na mmepe na omume SEO.
Lezienụ-kwa-pịa. Nke a dikwa irè, mana ejedebe na mkpụrụokwu ziri ezi ị kwụrụ na 5% na 15% nke clicks na Search Engine Results Page (SERP).
Na mmechi, ekwenyere m na ịde blọgụ bụ nnukwu ụzọ enyere ụlọ ọrụ iji mepụta ọdịnaya. Nakwa, blọọgụ nwere uru ọzọ nke RSS, na-enye gị ohere ibipụta na teknụzụ ndị ọzọ - Facebook, LinkedIn, Twitter (na Ikwusa ozi), na nchịkọta na weebụsaịtị.
Chọọ Google maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị (yana ọnọdụ ọ bụla dị adị). You na-egosi na nsonaazụ ndị ahụ? Ị kwesịrị! Ikwesiri ịnọ na peeji nsonaazụ ọchụchọ engine a.
Tags: aggregationịde blọgụịde blọgụ maka seoụlọ ọrụ ịde blọgụmbido peeji nkekwụọ ụgwọ kwa Pịaogbenye seonsonaazụ ọchụchọA@IGIHE
Daalụ maka itinye m na skit a na-atọ ụtọ nke na-akọwa isi ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị nwere ike (ndị nwere ike ịzụrụ ihe) enweghị ike ịchọta gị mgbe ha dị njikere ịzụrụ, ị nweghị ohere na azụmahịa ha.
Ihe ụmụaka ji egwuri egwu Tnomeralc
Enwere m mmasị na post a, karịsịa njikọ ikpeazụ! N'ime nde ibe akwụkwọ ahụ maka igodo ahụ, ọnụọgụ gị 1. Ọ dị ịtụnanya!